WINDOWS 10 (19H1) PREVIEW BUILD 18234 NAVOAKA, INONA NO VAOVAO! - MALEFAKA
Windows 10 (19H1) preview Build 18234 Navoaka, Inona no vaovao!
Nampiditra sary iray vaovao i Microsoft Windows 10 preview build 18234 . apps, Settings, Narrator, Network flyout niraikitra tamin'ny famantarana, sy ny maro hafa.
Miaraka amin'ireo fanatsarana ireo dia misy ny fanamboarana bug 19H1 manorina 18234 Microsoft dia nanao an-tserasera ny fanovana maromaro izay efa nisy teo aloha ho an'ny Insiders, ny fahafahana manova anarana vondrona tabilao ao amin'ny Microsoft Edge, ny fampisehoana fampisehoana ho an'ny lalao bar, ary ny aloka XAML vao haingana nampiana ho an'ny fanaraha-maso popup dia nilaza i Microsoft fa hiverina amin'ny sidina ho avy. .
Inona no vaovao Windows 10 (19H1) Build 18234?
Araka ny filazan'ny orinasa, ny Sticky Notes 3.0 dia azo alaina ho an'ny Windows 10 mpampiasa ao amin'ny Skip Ahead Ring, ny Microsoft To-Do izao dia misy ny fanohanan'ny Ink ary ny Snip & Sketch dia manana safidy hanemorana ny snip hatramin'ny 10 segondra. Tsindrio ny bokotra Vaovao dia hahita safidy vaovao telo ianao, anisan'izany ny Snip izao, Snip ao anatin'ny 3 segondra ary Snip ao anatin'ny 10 segondra.
Microsoft To-Do dia mahazo fanohanana ranomainty
Miaraka amin'ny preview 19H1 farany dia nampian'i Microsoft ny fanohanan'ny sora-tanana mba hahafahanao manao asa mora foana amin'ny Microsoft To-Do (dikan-teny 1.39.1808.31001 sy ambony). Ny endri-javatra ranomainty dia azo ampiasaina hisambotra ny asanao amin'ny fanoratana eo amin'ny tampon'ny lisitra, asio marika ho vita amin'ny alàlan'ny famelezana, ary asio marika eo amin'ny faribolana eo akaikin'izy ireo mba hamitana azy ireo. Miaraka amin'ny Ink ianao izao dia afaka:
Raiso ho azy ny asanao amin'ny fanoratana mivantana eo amin'ny lisitry ny lisitra.
Fenoy ny asanao amin'ny famelezana azy ireo.
Mampiasà marika ao anaty faribolana eo ankavian'ny asa iray hamitana azy.
Ity fananganana vaovao ity dia mampiditra ihany koa ny Sticky Notes 3.0, fanavaozana izay nambaran'i Microsoft tamin'ny herinandro lasa izay ary mila mamorona sy mitahiry naoty eo amin'ny biraonao. Ny Sticky Notes 3.0 dia tonga miaraka amin'ny lohahevitra maizina, fampifanarahana amin'ny fitaovana, ary endri-javatra maro hafa.
Mihatsara ny Snip & Sketch!
Windows 10 manangana 18234 dia mampiditra tweaks vaovao ho an'ny Snip & Sketch, fanoloana an'i Microsoft ho an'ny Tool Snipping izay mitambatra amin'izao fotoana izao amin'ny fananganana stable Windows 10 izay ahitana ny fanemorana ny asa. Nisy lesoka tao amin'ny fivoriambe 18219 nanakana ny fiasan'ny bokotra Vaovao, koa andramo aorian'ny fanavaozana! Tsindrio fotsiny ny chevron eo akaikin'ny bokotra Vaovao ao amin'ny fampiharana, ary ho hitanao izao ny safidy Capture Now, Capture for 3 seconds and Capture in 10 seconds. Raha misokatra na mipetaka amin'ny Taskbar ny fampiharana dia azonao atao ny manindry fotsiny ny kisary eo amin'ny Taskbar mba hahazoana ireo fanovana ireo, satria nampidirin'ny orinasa tao amin'ny lisitry ny navigateur.
Download Windows 10 manangana 18234
Windows 10 Preview Build 18234 dia tsy misy afa-tsy amin'ny Insiders ao amin'ny Skip Ahead Ring. Ary ny fitaovana mifanentana mifandray amin'ny mpizara Microsoft dia misintona ho azy sy mametraka ny 19H1 preview build 18234. Saingy azonao atao foana ny manery ny fanavaozana avy amin'ny Settings> Update & security> Windows Update ary tsindrio ny bokotra Check for updates.
Fanamarihana: Windows 10 19H1 Build dia tsy misy afa-tsy ho an'ireo mpampiasa izay nanatevin-daharana/Ampahany amin'ny peratra Skip Ahead. Na azonao atao ny manamarina ny fomba Ampidiro ny peratra skip ahead ary mankafy ny endri-javatra windows 10 19H1.
Fanovana ankapobeny, fanatsarana ary fanamboarana
Ny lohahevitra maizina File Explorer karama voalaza Eto dia tafiditra ao anatin'ity fananganana ity!
Namboarinay ilay olana hoe ny fivoahana amin'ny mombamomba ny mpampiasa anao na ny fanakatonana ny PC-nao dia mety hahatonga ny PC ho bugcheck (GSOD).
Misaotra ny rehetra tamin'ny fanehoan-kevitrao momba ny aloka XAML nampianay vao haingana. Entinay ivelan'ny aterineto izy ireo mandritra ny fotoana iasanay ny firesahana ny sasany amin'ireo zavatra nozarainao taminay. Ho hitanao koa fa nesorina tamin'ny fanaraha-maso popup sasany ny acrylic. Hiverina amin'ny sidina ho avy izy ireo.
Namboarinay olana ka nahatonga ny flyouts (tambajotra, volume, sns) tsy manana fiaviana acryl intsony.
Namboarina olana niafara tamin'ny fanantonana rehefa mampiasa WSL tamin'ny sidina teo aloha.
Nohavaozinay ny Panel Emoji hanohanana ny fikarohana sy ny fitaovana ho an'ny Emoji 11 emoji izay nisy nampiana vao haingana . Ireo teny fanalahidy ireo dia hameno ny faminaniana lahatsoratra rehefa mitendry amin'ny fitendry fikasihana.
Namboarinay olana iray izay hianjeran'ny explorer.exe raha ao anaty Tablet Mode ianao ary nanokatra ny Task View raha eo amin'ny orientation portrait.
Namboarinay olana iray izay mety hisehoan'ny kisary fampiharana ao amin'ny Task View somary manjavozavo amin'ny fitaovana DPI avo.
Namboarinay olana izay mety hifanipaka kely amin'ny scrollbar ny hetsika amin'ny fitaovana tery ao amin'ny Timeline.
Namboarinay olana iray izay mety hisy hadisoana tsy ampoizinao milaza fa tsy misy fampiharana tohanana napetraka, rehefa avy manindry hetsika sasany ao amin'ny Timeline, na dia misy fampiharana tohana aza napetraka.
Namboarinay ny olana izay ahafahan'ny tontolon'ny Taskbar ho mangarahara rehefa manova ny fitaovana sary.
Namboarina olana iray izay nahatonga ny fanindriana ireo kisary fampiharana amin'ny fikandrana naharitra ela kokoa noho ny mahazatra vao haingana.
Nametraka olana izahay rehefa avy nametraka pin sy nesorina izany, ny safidy hametraka pin avy amin'ny efijery hidin-trano dia mety ho tafahitsoka ho fomba fidirana default, fa tsy ny efijery fidirana hahatsiaro ny fomba fidirana tianao.
Nanao fanitsiana izahay mba hanatsarana ny habetsaky ny CPU ampiasain'ny cdpusersvc.
Namboarina olana izahay ka tsy mandeha ny bokotra Vaovao ao amin'ny Snip & Sketch.
Namboarinay olana iray niafara tamin'ny Fikarohana Notepad miaraka amin'ny endri-javatra Bing mitady 10 10 fa tsy 10 + 10 raha izany no fangatahana fikarohana. Nametraka olana ihany koa izahay izay hahatonga ny tarehin-tsoratra misy tsindrim-peo ho marika fanontaniana amin'ny fikarohana vokatr'izany.
Namboarina olana iray izay tsy mety miasa ny Ctrl + 0 hamerenana ny haavon'ny zoom ao amin'ny Notepad raha toa ka nosoratana tamin'ny keypad ny 0.
Namboarina olana vao haingana izay niteraka fitomboan'ny fotoana natokana hanokafana rakitra lehibe ao amin'ny Notepad rehefa navela ny fonon-teny.
Misaotra an'ireo rehetra nizara hevitra momba ny fanomezana anarana ireo tabilao natokanao tao amin'ny Microsoft Edge. Manombatombana ny fomba mety amin'ity endri-javatra ity izahay ary mandritra izany fotoana izany dia nesorina izany.
Nametraka olana izahay izay hijanonan'ny fampidinana rakitra lehibe ao amin'ny Microsoft Edge amin'ny marika 4gb.
Nametraka olana izahay izay nipoitra ny bokotra bebe kokoa amin'ny famaritana an-tsoratra an'ny Microsoft Edge rehefa mamaky pejy tsy misy dikany ny famakiana tamin'ny sidina vao haingana.
Nametraka olana izahay izay mety ho tapaka ny singa ao amin'ny menio Microsoft Edge's Settings and More rehefa alefa ao amin'ny Settings ny safidy hampitomboana ny haben'ny lahatsoratra.
Nametraka olana izahay izay tsy nanasongadinana / nisafidy ny vokatra misy ankehitriny ny fampiasana Find on page ao amin'ny Microsoft Edge.
Nametraka olana izahay rehefa avy namerina ny Microsoft Edge voatahiry ny ankafizina dia mijanona amin'ny fampisehoana kintana eo akaikin'ny anarana ankafizina fa tsy mametraka ny favicon an'ny tranokala (raha misy).
Nametraka olana izahay izay tsy azo apetaka amin'ny fampiharana UWP hafa ny lahatsoratra nadika avy amin'ny tranokala sasany ao amin'ny Microsoft Edge.
Namboarina olana iray izay mety hahatonga ny atiny amin'ny fikandrana Microsoft Edge ho lasa offset amin'ny fikandrana.
Namboarinay olana nahatonga ny menio fitsikilovana miseho amin'ny toerana tsy mety rehefa manindry havanana amin'ny teny diso tsipelina ao amin'ny Microsoft Edge ianao.
Namboarina olana ho an'ny Insiders mampiasa Windows 10 amin'ny S Mode vao haingana izay nahatonga ny fanokafana Word avy amin'ny antontan-taratasy Word Online tsy mandeha.
Namboarinay olana nisy fiantraikany teo amin'ny Ekipa ka nanjavona avokoa ny lahatsoratra nosoratana tsy nalefa taorian'ny fahavitan'ny famoronana emoji (ohatra, nivadika ho smiley).
Namboarinay olana iray izay mety ho voasakana ny fizarana eo akaiky eo amin'ny fitaovana mpandefa rehefa nofoanana ny fizarana amin'ny fitaovana telo samihafa.
Namboarinay olana nahatonga ny fizarana fizarana teo akaiky teo amin'ny Share UI tsy ho hitan'ny mpampiasa sasany na dia alefa aza.
Nanamboatra olana izahay tamin'ny sidina vao haingana izay mety hipoitra ny singa amin'ny fampandrenesana miaraka amin'ny bara fandrosoana (toy ilay rehefa mampiasa fizarana eo akaiky eo) isaky ny havaozina ny bara fandrosoana.
Nametraka olana izahay tamin'ny fananganana vao haingana izay nahatonga ny fizarana kendrena windows (aka ilay fampiharana nofidinao rehefa nasain'ny Share UI) tsy nikatona rehefa nanendry Alt+F4 na X ianao.
Namboarina olana niteraka fihenan'ny fahatokisana Start nandritra ny sidina vitsivitsy farany.
Namboarina toe-javatra nisy fiantraikany tamin'ny hazakazaka izahay tamin'ny sidina vao haingana izay niafara tamin'ny fianjeran'i Cortana rehefa namoaka toro-hevitra sy nanao fikarohana amin'ny Internet.
Nanamboatra olana izahay izay naharitra ela kokoa noho ny mahazatra vao haingana ny fipihana havanana amin'ny desktop sy ny fanitarana ny fizarana vaovao amin'ny menu context.
Namboarinay ny olana nahatonga ny Office ao amin'ny fivarotana tsy natomboka tamin'ny fahadisoana momba ny .dll tsy natao ho an'ny Windows amin'ny PC mandeha amin'ny S Mode.
Nametraka olana izahay izay, rehefa mametraka endritsoratra ho an'ny mpampiasa tokana (fa tsy mametraka ho admin ho an'ny mpampiasa rehetra), dia tsy nahomby ny fametrahana noho ny hadisoana tsy nampoizina milaza fa tsy rakitra endri-tsoratra manan-kery ilay rakitra.
Namboarinay ny olana iray izay ahafahan'ny mpampiasa tsy mpitantana eo an-toerana mahazo lesoka milaza fa ny fanavaozana ny fanontaniana fiarovana amin'ny kaontiny dia mitaky fahazoan-dàlana amin'ny admin.
Namboarinay olana vao haingana izay tsy nampiharina tsara ny firafitry ny loko sy ny wallpaper taorian'ny fanavaozana ny rafitra rehefa natao tamin'ny fomba ivelan'ny aterineto ny fifindra-monina.
Namboarina olana izahay ka nitombo be vao haingana ny fotoana nanombohana ny Settings.
Nametraka olana izahay raha toa ka misokatra amin'ny Bluetooth & Fitaovana hafa ny Settings ary avy eo dia nahena ho any amin'ny barazy rehefa nanandrana nanohy ny app Settings ianao dia hianjera.
Namboarinay olana tamin'ny fananganana vao haingana izay nisafidy voalohany ny daty tamin'ny fikandrana Date & Ora dia hiverina amin'ny 1 janoary izany.
Havaozinay hatramin'ny 1MB ka hatramin'ny 4MB ny fetran'ny haben'ny sary ho an'ny tantaran'ny clipboard (WIN + V) mba handraisana ny mety ho haben'ny pikantsary feno efijery nalaina tamin'ny fitaovana DPI avo lenta.
Nametraka olana izahay rehefa mampiasa ny IME Shinoa (Simplified) dia hamoaka fahatsiarovana amin'ny fifantohana fifantohana, manampy ny fotoana.
Namboarinay olana nahatonga ny faminaniany lahatsoratra sy ny fanoratana endrika tsy mandeha rehefa manoratra amin'ny teny rosiana mampiasa ny fitendry fikasihana.
Nametraka olana vao haingana izahay izay mety hiteraka fifandraisana amin'ny tambajotra flakey (anisan'izany ny tambajotra mijanona amin'ny famantarana, sy ny toetry ny fifandraisana amin'ny flyout). Mariho fa misy antony maro samihafa mety hisy fiantraikany amin'ny traikefanao amin'ny tambajotra, koa raha mbola mahatsapa fikorontanana ianao aorian'ny fanavaozana an'ity fananganana ity, dia midira ny valin-kevitra.
Misaotra an'ireo rehetra nanandrana sy nizara hevitra momba ny fampisehoana fampisehoana nampidirinay tao amin'ny bara lalao Build 17692 . Entinay ivelan'ny aterineto izy ireo, amin'izao fotoana izao, mba hanombanana indray ny fomba tsara indrindra azo atao mandroso sy hiasa amin'ny fanomezana anao traikefa mahafinaritra amin'ny lalao amin'ny PC-nao.
Namboarina olana tao amin'ny Narrator izahay ka rehefa manodina boaty fisaka misy braille display sy Narrator, dia havaozina izao ny fanjakana naseho ary tazomina ao amin'ny fampiratiana ny fampahalalana momba ny fanaraha-maso.
Rehefa mampiasa ny fahalalahana hidirana Ataovy lehibe kokoa ny lahatsoratra, dia mety hahita olana amin'ny fametahana lahatsoratra ianao, na hahita fa tsy mitombo ny haben'ny lahatsoratra na aiza na aiza.
Rehefa mampiasa baiko Shift + Selection mode Narrator Scan amin'ny Edge dia tsy voafantina tsara ny lahatsoratra.
Ny mpitantara indraindray dia tsy mamaky ao amin'ny app Settings rehefa mandeha amin'ny fampiasana ny bokotra Tab sy zana-tsipìka ianao. Andramo mifindra vetivety amin'ny mode Narrator Scan. Ary rehefa vonoinao indray ny maody Scan, dia hamaky izao ny Narrator rehefa mandeha amin'ny alàlan'ny kiheba sy ny zana-tsipìka ianao. Raha tsy izany, azonao atao ny mamerina indray ny Narrator mba hamahana ity olana ity.
Ity fananganana ity dia mamaha olana amin'ny ankapobeny izay miteraka rohy izay nandefa fampiharana iray avy amin'ny fampiharana iray hafa tsy mandeha amin'ny sidina farany ho an'ny Insiders sasany, na izany aza, misy karazany iray manokana amin'izany izay mbola tsy mandeha amin'ny fananganana ankehitriny: tsindrio ny rohy amin'ny tranonkala amin'ny PWA toy izany. satria tsy manokatra ny navigateur ny Twitter. Miasa fanamboarana izahay.
Mety ho tsikaritrao ny ambadiky ny fampandrenesana ary very loko ny Action Center ary lasa mangarahara (miaraka amin'ny effet acrylic). Fantatray fa noho ny fampandrenesana dia mety hahasarotra azy ireo ny mamaky sy mankasitraka ny faharetanao rehefa miasa amin'ny fanamboarana izahay.
[ADDED] Mety tsy ho vitanao ny hanova ny haben'ny fikandrana Task Manager amin'ity fananganana ity.